Funda ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-EcoThrift! - Isikhungo se-EcoTechnology
Ukubengezela kweringi kukhanya emehlweni akhe. I-YouTuber ithinta inqwaba yezingubo embhedeni wayo. Izinkinga ukuthi izingubo zintsha sha, zenziwe ngobunono, futhi zizoya endaweni eyodwa maduze nje ngokwanele: indawo yokulahla udoti. Le nkinga ihlanganiswe igama elithi udoti wendwangu. Imfucuza yendwangu ichazwa yi-Environmental Protection Agency njengodoti odalwa ukusakazwa kwempahla engalungiseki (i-EPA). Izimpahla ezingenakubekezelelwa yizinto okucatshangwa ukuthi ziwusizo cishe iminyaka emithathu kuphela (i-EPA). Imfucuza yendwangu iyabhekela njengoba inegalelo elikhulu kumanani okugcwaliswa komhlaba.
Khonamanjalo, inqubo yokwenziwa kwezindwangu nokonakala iholela ezinkingeni ezihlanganisa ukungcoliswa komoya namanzi (Utebay et al.) Kalula nje, imfashini esheshayo iyisandulela semfucuza yendwangu. Ngakho-ke, kukhona nokukhathazeka kokuziphatha okuzungeze imfucuza yendwangu. Izinhlelo zemfashini ezisheshayo zithuthukisa izindlela zokuxhashazwa kwabasebenzi emazweni asathuthuka kanye nodlame olubhekiswe kwabesifazane (Green America).
Mina nawe sobabili sinendima yakho kukho konke lokhu. Cabanga ngenani lemfucumfucu yezingubo okhiqizwa umuntu e-United States ngonyaka - amakhilogremu angama-81.6 (BBC). Njengoba kunikezwe lokho, singabamba iqhaza elibonakalayo ekwehliseni imfucuza yendwangu nokunciphisa ukwesekwa kwemboni yezemfashini esheshayo. Ngokuthatha izinyathelo zokunciphisa ukusetshenziswa kwethu kwezimpahla ezingasimami, singanciphisa inani elilindelekile lemfucuza ehlobene nezingubo, ingasaphathwa eyokuhlupheka okuhambisana nakho.
Kukhona ithemba ngenxa yalokhu kungenzeka. Kungaba yiyo yonke i-YouTuber eyenza ukushesha kwemfashini ngokushesha, kukhona okubonisa okuthile abakucoshe emakethe yezinhlanzi. Kunentshisekelo yomphakathi ekhulayo njalo uma kukhulunywa ngezingubo ezisetshenziswe ngobunono zezingubo. Imakethe yezingubo ezingamasekeni kulindeleke ukuthi ikhule kakhulu eminyakeni ezayo, ngesibikezelo sokuthi izokwakhiwa cishe ngama- $ 84 billion ngesikhathi kufika u-2030 (Harper's Bazaar). Kucatshangwa ukuthi imfashini esheshayo, eyenza ukwenziwa nokuthengiswa kwezingubo ezingasimami, izobalwa ngaphansi kwengxenye yaleyo mali ngonyaka ofanayo (iHarper's Bazaar). Izibalo ezinjengalezi zisikhombisa ukuthi kunenye indlela yangempela ongathenga ngayo izinto ezintsha sha futhi ubhebhezele imfashini esheshayo.
Ungahle uzibuze ngesimo sezitolo ezidayisa imali kusukela ku-COVID-19. Ukuthenga ekuphakameni kobhubhane kwakuwumsebenzi ocekeceke kakhulu, obekelwe izinto ezibalulekile njengokudla. Izitolo zakwa-Thrift ngokwemvelo zabona ukuxhaswa okuncane kakhulu ngaleso sikhathi, kepha kanjalo nezitolo ezijwayelekile. Ungacabanga ukuthi lo mkhuba uqhubekile njengoba ubhadane seludonse isikhathi eside, abantu besaba izifo ezibambelela ezingutsheni.
Kodwa-ke, ukwesaba kubonakala kwehlile njengoba izitolo ezidayisa imali zihamba kahle. Imfashini esheshayo ayikaze ihambisane nayo. Umthelela wezomnotho we-COVID-19 awungeqiwa. Imfashini esheshayo muva nje icishe yawa ngokuphelele mayelana nezinhlelo zayo zokuhlinzeka (uBrydges et al). Abantu balahlekelwa yimithombo yabo yemali njengoba umsebenzi waba yingozi kakhulu.
Kusukela kumabhontshisi kuya kumajaketi, ungathola izindatshana eziningi zezingubo ezithengiswa endaweni yangakini (noma ebonakalayo) esitolo sezitolo.
Njengoba kunikezwe le misebenzi yamandla, akumangalisi-ke ukuthi izitolo ezidayisa ezitolo ezinkulu zibhekane nokuqubuka ekuxhasweni kanye neminikelo, njengoba abanye abantu befuna ukonga imali kanti abanye bafuna ukunciphisa umthwalo wendlu yabo (IColumbian). Ngasikhathi sinye, imithombo yezokuxhumana yeqiniso iyaqhubeka nokuba yi-behemoth, futhi izinhlelo zokusebenza ezinjengeTikTok zinabasebenzisi abakhombisa abakutholile. Lokhu kukhuthaza abanye phakathi kwezizukulwane ezisencane ukuthi bathenge ngokunakekela ngokwengeziwe, ngokusho kwekhasimende lesitolo esidayisa izimpahla okwaxoxwa ngalo nephephandaba lendawo (Williams, The Columbian).
Ngokubambisana sinqume ukuthi izingqinamba ezingaba khona ekuqongeleleni ziyancipha. Kunezindlela eziningi zokukhetha ukonga okusatholakala kithina yize kungubhadane. Sicela ufunde uqhubeke ukuze ufunde kabanzi mayelana nokubekisa!
Ukuzikhulula: Ukuphepha nokuhlanzeka kwakho, qiniseka ukuthi ugeza kahle noma yiziphi izingubo ozithengayo ngaphambi kokuzigqoka. Lokhu kusebenza noma ngabe kuyabekwa noma cha!
Funda ukuze ufunde ngezinketho ezahlukahlukene onazo uma kukhulunywa ngokuqhakaza!
Dedelana uhlelo lokusebenza oludumile olwethulwe ngo-2011. Abasebenzisi bangathengisa izinto ezifana nezingubo nezinto zokuhloba ezenziwe ngezandla kuhlelo lokusebenza. Ngithengile izingubo eziningi ezisezingeni eliphakeme zokuvuna kwaDepop.
Amawebhusayithi (kufaka phakathi amasayithi we-Luxury Consignment)
I-ThredUp, PoshMark, TheRealReal, Ebay, Etsy, I-Facebook Marketplace. Lawa ngamanye amawebhusayithi akuvumela ukuthi ufinyelele ezintweni ezivuthiwe nezisetshenzisiwe, kufaka phakathi nemikhiqizo yokunethezeka.
Ukuhlangana kokushintshana kuyindlela enhle yokuhlangana nabantu abasha ngenkathi "uthenga" ngokuqaphela nangaphandle kwezindleko zangempela. Vele, gcina ukuphepha engqondweni uma ukhetha ukubamba iqhaza ekuhlanganyeleni kokushintshana. Cabanga ukusingatha eyodwa emsebenzini wakho uma usebenza mathupha.
Vele kukhona izitolo zezitini nodaka ongaya kuzo njalo. Qiniseka ukuthi ulandela noma yimiphi imihlahlandlela yezokuphepha lapho uphuma.
“Ukuthenga” okungaphansi nasekhabethe
Amathuba ukuthi uphonse ngaphezulu kwendatshana eyodwa yezingubo ekujuleni, ekujuleni okumnyama kwekhabethe lakho. Noma uma unendlu engaphansi, ubeke izinto lapho, ezingaphinde zigqokwe noma zisetshenziswe futhi. “Ukuthenga” okungaphansi nekhabethe kungakusiza ukuthi uphinde uthole izingcezu, kufaka phakathi okokugqoka nezindwangu obukade ungakusebenzisi ngoba usukhohliwe ngazo. Ngisanda kufuna ukuthenga umbhede omusha esikhwameni, kodwa ngiqale ngabheka ikamelo lami elingaphansi futhi ngathola umduduzi omuhle, cishe omusha engangiwusebenzisa ngaphambili ekamelweni lami lokulala.
Ukuthenga amawindi kuhlale kuyindlela emnandi yokuchitha isikhathi! Uma ucabanga ukuthenga okuthile okungaphuthumi, linda isikhathi seviki bese ubona ukuthi ungaphila ngaphandle kokuthenga leyo nto ngokushesha.
Zama ukufaka ukufaka imali empilweni yakho bese ubona ukuthi kuletha ziphi izinzuzo. Kuyindlela elula yokuthenga ngemali engabizi ngezinto ezithile ozidingayo. Futhi njengoba simbozile, kunezinqwaba zamapulatifomu ongadlula kuzo bese ufunela into yakho entsha oyithandayo.